तिम्रो विहे कहिले ? |
प्रकाशित मिति :2016-02-07 13:29:03
सामान्य परिवारकी जेठी छोरी । घरको जिम्मेवारी मै माथि छ । आमाबुबाले खानालाई पुग्ने खेतवारी समाल्नुहुन्छ । जागिर गरेर घर खर्च चलाउँदै आएकी म भोली छोरा भएको भए यस्तो गर्दथेँ भन्ने कुराको पछुतो नहोला मेरा आमाबुबालाई ।
फेरी पत्रकार सरले भन्नुभयो कुरा त ठूलाठूला नै गरेउँ तिमीले तर, यथार्थमा यस्तो हुँदैन तिमीले सोचेको विचारमा सहमत हुने समाजको निमार्ण अझै भएको छैन । मैले भने, त्यो समाजको निमार्ण म जस्तै सोच भएकाले गर्नछन् नि सर ? केटीको जीवनमा कसै केटासगँ नाम जोडिएर आउँछ भने भोली अरूले विवाह गर्ने मान्दैनन् । तिम्रो पनि …….केटासँग नाम चलेको छ त । त्यसैले विवाह समयमा नै गर । के म केटी हुँ भन्दैमा कुनै केटासगँ बोल्न नपाउने ? हिड्न नपाउने ? कोही केटासँग हिड्दैमा त्यो मेरो ब्वाेइफ्रेण्ड भैहाल्ने ? जोसँग विचार मिल्छ त्यो साथी बन्छ चाहे त्यो केटा होस् वा केटी ।
महिला पुरुष समान महिलालाई सपोर्ट गर्नु पर्दछ, महिला हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने पुरुषको यस्तै सोच छ भने कसरी महिला पुरुष समान हुन्छ ? जब केटा केटी हिँड्दैमा केटीका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने, उसको चरित्रमा प्रश्न उठाउने यही समाज त होला । जो महिलालाई हृयददेखि सम्मान गर्ने जानेको होस्, मेरो जस्तै सोच भएको होस् । भोली कुनै पनि केटी केटासँगै हिँड्दै गर्दा मेरो चरित्रमा प्रश्न उठाउँछ की यो समाजले भनेर डराई डराई हिड्न नपरोस् । फेरी अर्को केटीको कुरा काटेर समय बिताउने गफ नबनोस् ।
निर्धक्कसँग केटा र केटी यो समाजमा हिँड्न पाउन बोल्न पाउन । केटीलाई विभिन्न बाहानामा समाजले लगाउने बन्धन तोड्न सकुन कसैसँग नाम चलेको र बदनामी हुने डरले जवर्जस्ति विवाह गर्न नपरोस् । आफ्नो कामवाट बिस्थापित हुन नपरोस् । यस्तो समाजको निमार्ण हामीले त गर्ने ‘सर’ ।
तपाईको सोचबाट चल्ने कलमले समाज परिवर्तन गर्ने छैन । त्यसपछि म आफ्नो बाटो लागे ……. ।
प्रकाशित मिति २०७२ माघ २४ गते आईतवार